Barnaamij lagu soo bandhigayo "waxyaabo lala fajacay" oo ku saabsan Michael Jackson - Aayaha
Aayaha editorJanuary 11, 2019
Kooxda taageerta Michael Jackson ayaa si kulul u cambaareysay barnaamij Dukumintari ah oo lagu sheegay eedeymo ku saabsan in xiddigaas caanka ku ahaa heesaha Pop-ka uu xad-gudubyo galmo ah u geystay carruur.
Barnaamijkaas oo lagu wareystay 2 ruux oo la sheegay iney dhibaneyaal u yihiin Michael Jackson ayaa la filayaa in lagu daro bandhig faneed loogu tala galay filimada oo dhici doona bishan Janaayo.
Wakiillo ka tirsan taageerayaasha daacadda u ah Jackson ayaa jawaabtooda kulul ku bixiyay bayaan ay soo saareen.
“Kani waa barnaamij kale oo laga naxo isla markaana caro dhalinaya, waxaana looga gol leeyahay in lagu sumcad dilo fannaanka oo lacagna lagu helo sababta Michael Jackson”, ayaa lagu yiri bayaankaas.
Waxay sidoo kale ku tilmaameen in macluumaadkaasi ay yihiin kuwo lala fajaco.
2 nin oo kasoo muuqday filimka laga sameeyay barnaamijkaas ayaa sheegay in iyagoo ay da’dooda kala tahay 7 jir iyo 10 jir uu Jackson la saaxiibay qoysaskooda.
Hadda oo ay da’dooda tahay 30-meeyo sano ayey ku eedeeyeen heesaaga dhintay inuu xad gudubyo galmo ku sameeyay.
Booliska ayaa weerar ku qaaday xarunta Michael Jackson ee gobolka California – sida lagu xusay mid ka mid ah ciwaannada barnaamijka oo qeexay in Jackson uu sannadkii 2003-dii tacaddi galmo u geystay wiil 13 sano jir ah.
Kiiskaas ayaa maxkamad loo gudbiyay waxaana Jackson dambi ah lagu waayay sanadkii 2005-tii.
Qaar ka mid ah qoraallada barnaamijka dukumintariga ah ayaa lagu sheegay in iyadoo xitaa wareysiyo lala yeeshay dhibaneyaasha maanta raga waaweyn ah iyo qoysaskooda ay haddana jirtay in awoodda caanimada uu u adeegsaday inuu ku muquuniyo qoysas isugu jira carruur iyo waalidiintooda.
Filimkaas oo ka kooban 2 qeybood ayaa waxaa hagay Dan Reed, oo sidoo kale horay uga dambeeyay barnaamijyo kale oo dukumintariyo ah.
Waxaa muuqaalkaas marka ugu horreysa si toos ah loogu sii deyn doonaa bandhiga dhacaya 25-ka ilaa 26-ka bishan.
Soo saarista barnaamijkan waxaa isla wadaagay telefishinnada Channel 4, HBO iyo Reed waxaana dhowr habeen oo isku xigta laga daawan doonaa dalka Ingiriiska.
Mas’uuliyiinta Channel 4 ayaa BBC-da u sheegay in filimku uu “ahaa mid waddada ku soo jiray muddo dhowr sano ah”.
Michael Jackson ayaa geeriyooday 25-kii bishii Juunyo ee sannadkii 2009-kii, isagoo markaas ay da’diisu ahayd 50 sano.